नाटक : दाम्ला / प्रवीण पुमा – सुलेख साहित्यिक मासिक पत्रिका
सुलेख साहित्यिक मासिक पत्रिका > साहित्य > नाटक > नाटक : दाम्ला / प्रवीण पुमा
(हीरामोती जडित सुनैसुनको घरमा एक बूढी आइमाई झोक्रिएर बसेकी छन् । त्यो बूढीको वरिपरि सबै सामानहरू लथालिङ्ग छ । चुलाको छेउमा भाँडा छोपेर राखिएको छ ।)
आमा ः (मनोवादमा) अहिले म बिरामी छु । तर यो साउनमा सबै मोङ१हरू गुफा बसेको छ । दोवाथोम्मा२ पनि हुँदैन । मेरो बिमार लम्बिएला जस्तो छ ।
मधेश ः (धनुवाण काँधमा भिरेर प्रवेश गर्दै) आमा ¤
मधेश ः ए ¤ केही पनि हैन ।
मधेश ः सिकार खेल्नु ।
मधेश ः उम्कियो ।
आमा ः सधैँ सिकार खेलेर घर चल्छ ?
मधेश ः (प्रतिप्रश्न गर्दै) के गर्नु त, सधैँ भोकै भएपछि ? के मचाहिँ
भोकभोकै मरौँ ?
आमा ः त्यसरी ता हुँदैन । सबैले बाँडीचुँडी बराबर खानुपर्छ ।
मधेश ः कसरी बराबर खानु ? सधैँ पहाडले मात्रै खाएपछि । म मात्रै हो र ? हिमाल पनि भोकै छ ।
मधेश ः (बेवास्ता गर्दै) कोन्त ।
(हिमालको प्रवेश हुन्छ ।)
हिमाल ः (ठाडो भाषामा) हई ।
आमा ः सधैँ घुमेर जीवन चल्छ त ?
हिमाल ः खै, थाहा छैन ।
आमा ः वाइयात ¤ के घुमेको त ?
हिमाल ः पहाडले छेकेपछि के गर्नु त ? ज्यान जोगाउनुकै लागि भए पनि बाहिरिनु परेन ? भोकभोकै को बस्नु सक्छ ? त्यसैले सिकार खेल्नु गा’को थिएँ नि ¤
हिमाल ः (मधेशतिर देखाउँदै) ऊ त्यो मधेशले उम्कायो नि ¤ पासोमा परिसकेको थियो । खुब जान्ने भएर यसले उम्कायो । (लोपार्दै) अब यी खान । सिकार जति उम्काइ हालिस् । मुखमा खानु जुरेको भापो त । अब भुत्रो खान ।
मधेश ः (प्रतिपाद गर्दै) नकरा । खुब जान्ने हुन्छ । आपैm भाँती पु¥याउँदैन । अरूलाई दोष दिन्छ । सिकार मारेको भए त खुब खुसी हुन्थिस् होला नि ¤
हिमाल ः नकरा । जाबो पासोमा पारेको सिकारलाई पनि उम्काउने, मुला ¤ खुब ठूलो कुरा गर्छ ।
मधेश ः गर्छु त नि ¤ सिकार मारेको भए पनि टाउको र ह्याकुला जति लगिहाल्थिस् । मेरो भागमा ता उई खुट्टा त हो नि ¤
हिमाल ः खुट्टा मात्रै होइन, पुच्छर पनि पाउँथिस् नि ¤
मधेश ः नकरा । नाच्नु जान्दैन, आँगन टेरो ।
हिमाल ः अँ ¤ किन बोला’को ?
पहाड ः (बस्दै) हैन, तिमीहरू कता हरायौ, हरायौ र नि ¤ यहाँँ दाम्ला बाट्ने काम पनि त्यतिकै छ ।
मधेश ः आपैm बाट् न । तैँले भनेभने
जस्तो हामीले बाट्नुपर्छ भन्ने कर छ र ?
पहाड ः हे ¤ केटा हो, नरिसाओ न यार । यहाँ दाम्ला नहुँदा आमाले करकर गरेको गरेकै छ । फेरि पशुहरूले बाली खाएर हैरान बनाइसक्यो । मेरो ता गोठाला गर्दैमा जीवन जाला जस्तो भो ।
पहाड ः पहिलाको कुरा छोडिदेऊ यार । पहिला त तिमीहरूले पनि खा’कै हौ नि ¤
मधेश ः खानु त खाने नै हो नि ¤ तर खानु पनि जान्नु पो पर्छ त ¤
मधेश ः त्यै त भनेको । डोकाले छोपेर हसुरेपछि पनि हुन्छ ?
पहाड ः अब पहिला तीतोमीठो जे भयो, भयो । त्यसलाई बिर्सिएर अबचाहिँ मिलेर दाम्ला बाटौँ । भात पनि बाँडेर खाऊँ । अब यसरी हुँदैन । हामी मिल्नुपर्छ ।
हिमाल ः मिल्नु ता मिल्ने, तर कसरी
मिल्ने ? त्यत्तिकै मिलौँमिलौँ मात्रै भनेर हुन्छ ?
मधेश ः त्यै त भनेको ? पहिला पनि ‘मिलेर काम गर्ने, भात पनि बाँडेर खाने भन्यौ । तर पछि खाने बेलामा चाहिँ आपैm हसु¥यौ । हामीलाई चाहिँ भोकभोकै राख्यौ । के यसपालि पनि हामीलाई भोकभोकै राख्ने विचार छ ? (हात हल्लाउँदै) त्यसैले अब यसरी हुँदैन । पहिला सबै कुराको छिनोफानो गरौँ । अनि मात्रै बाँकी काम अगाडि बड्छ । नत्र काम अगाडि बढ्दैन ।
पहाड ः त्यसो नभन न । आमा पनि बिरामी हुनुहुन्छ । दाम्ला पनि बाटेको छैन । पशुहरूले दुःख दिएर हैरान पारिसक्यो । बरु भोकायौ होला । आओ भात खानु ।
मधेश ः (हतारिँदै) ल ल । त्यसो भा पहिला भात खाऔँ ।
आमा ः (रोक्दै) केको भात ? भातसात छैन ।
हिमाल ः त्यसो नभन्नु न आमा ¤ म त भोकले मर्नु आँटेको छु । भात नखाको पनि धेरै भयो ।
मधेश ः त्यै त आमा । अस्तिदेखि भोकै छौँ । भोकले हातखुट्टै चल्नु छोड्यो । शरीर नै शिथिल भइसक्यो । अनुहार पनि मरिसक्यो ।
आमा ः (रोक्दै) कामै नगरी कसले दिन्छ भात ? पहिला काम सक्ने । अनि मात्रै भात खाने । तिमीहरूलाई एउटा दाम्ला बाट्नु पनि यति
हत्ते ? चाहिएको बेलामा दाम्ला नबाटे कहिले बाट्छौ ?
पहाड ः बिस्तारै बाटौँला नि, आमा । केको हतार ? यहाँँ दाम्ला बाट्नु कस्तो गाह्रो छ । बाटे पनि पोयै मिल्दैन ।
आमा ः एक्लै बाटेपछि पनि कहाँ मिल्छ
त ? सबै भएर बाट्नुप¥यो नि ¤
पहाड ः मिलेर त बाटौँ भनेकै हो नि ¤
(हिमाल र मधेशतिर देखाउँदै) यिनीहरूले मलाई बाट्नै दिँदैन । बाट्यो कि, बिगारी हाल्छ । त्यै भएर ढिलो भा’को नि ¤
मधेश ः हेर न हेर । फेरि पानीमुनिको ओभानो भा’को ¤ यस्तै हो भने तँ आपैm बाट् ।
हिमाल ः त्यै त । खुब आपूm मात्रै हिरो पल्टिँदो रै’छ ¤
पहाड ः नकरा ¤ टोपाहरू ¤
मधेश ः (आक्रोशमा) के अरे फेरि भन् ? फेरि भन् त ?
आमा ः (आक्रोशमा) नकराओ । कति बाझिरहेको ? छिमेकीहरूले पनि के भन्छ ?
पहाडी ः के भन्छ र ? के न के ¤ अलिअलि त घर झगडा भैहाल्छ नि ¤
आमा ः क्याङ्मीहरू ¤ सधैँ बाझिरहन्छ । (दर्शकहरूतिर हेर्दै) हन तपाईंहरूको परिवारमा पनि यसरी बाझिरहनु हुन्छ ?
समुद्र ः (प्रवेश गर्दै) म त नसोधी नै
आएँ है ?
समुद्र ः हैन, तिमी बिरामी छौ । त्यै भएर आ’को ।
आमा ः म बिरामी हुँदा तिमीलाई केको टिकटिक ?
आमा ः स¥यो भने स¥यो नि ¤ मलाई केको मतलब ?
समुन्द्र ः त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ ? तिम्रो बिमार हामीलाई स¥यो भने त खत्तमै भइहाल्छ नि ¤ त्यै भएर तिमीलाई लिनु आ’को । जाऊँ, हाम्रैतिर । यहाँँ तिमीलाई स्याहार पनि पुग्दैन । जहाँ भए पनि बस्नु नै त हो नि ¤
आमा ः (आक्रोशमा) के अरे ? फेरि भन् ? मुख समालेर बोल् है । चाहिनेभन्दा धेरै बोल्दा भेट्लास् नि भाउ ¤
समुद्र ः के पूmर्ति लाउँछस् ? म बेगर तेरो घरको चुला बल्दैन । आदर्शले जीवन चल्छ ? जाबो मुसाको ज्यानले हात्तीको धाक दिन्छ । सक्छस् भने सियो बनाएर देखा
न ¤ अनि पत्याउँला ।
आमा ः (आक्रोशमा) खुरुक्कै जान्छस्
कि, छिमेकीहरूलाई गुहारेर पूजा गरौँ ?
समुद्र ः के बेकुब रै’छ ¤ दुःख पायो भनेर लैजाऊ भनेको ता उल्टै पो थर्काउँछ बाई ?
पहाड ः (सम्झाउँदै) समुद्रजी, बूढाबूढी
मान्छे यस्तै हो । कुरा बुझ्दैन । अहिले तपाईं जानुहोस् । मौका मिले फेरि भेटौँला ।
समुद्र ः (जाँदै) ल ल । तर फेरि पनि यस्तो धाक सुनेँ भनेचाहिँ ठीक
हुँदैन नि ¤
पहाड ः (सम्झाएर पठाउँदै) ल ल । अहिले जानुहोस्, … जानुहोस् ¤
हिमाल ः (अचम्म हुँदै) हन, यो के
अचम्म यार ? हाम्रै घरमा आएर थर्कायो त ?
मधेश ः थर्काउनु मात्रै कहाँ हो र ? दागै धरेर गयो नि ¤
हिमाल ः दागै मात्रै कहाँ हो र ? मौका परे घरै उडाउँछ ।
आमा ः (सम्झाउँदै) हो, त्यै भएर घरपरिवार मिल्नुपर्छ । घर बलियो भयो भने कसैको केही चल्दैन । त्यसैले अब तिमीहरू सबै दाजुभाइ मिलेर दाम्ला बाटेर राख है । (भक्कानिएर रुँदै) अब म त बाँच्दिनँ होला । म मरेँ भने तिमीहरू टुहुरा हुन्छौँ । टुहुरा भयौ भने सबैले हेप्छ । यो घरलाई स्याहार पनि पुग्दैन । यतिखेर यो घरलाई हुरीले उडाउनु सक्छ । होसियार हुनू है ।
(हिमाल, पहाड र मधेश पनि भक्कानिएर रुन्छ ।)
पहाड ः (भक्कानिएर रुएपछि) हुन्छ, आमा । तपाईं, चिन्ता नगर्नुहोस् । हामी छौँ । तपाईंलाई केही पनि हुँदैन ।
मधेश ः (भक्कानिएर रुएपछि) हो आमा । हामी छौँ । तपाईंलाई जसरी भए पनि बचाउँछौँ । यो घरलाई जोगाएर राख्छौँ ।
हिमाल ः (भक्कानिएर रुएपछि) आमा, तपाईंलाई केही पनि हुँदैन । केही भैहाले मुन्दुम३ जपेर उपकार गर्छौ । तपाईंलाई जसरी भए पनि निको पार्छौं । तपाईं निको भएपछि यो घरको मुहारै फेरिनेछ । यहाँँको सबै पूmलहरू पनि हराभरा हुनेछ । तपाईं ढुक्क हुनुहोस्, आमा ¤
छोराहरू ः हो आमा, हामी अहिलेदेखि नै सबै मिलेर दाम्ला बाट्छौँ । त्यो दाम्लाले सबै बैमानी पशुहरूलाई पनि बाँघेर राख्छौँ, आमा । बाँघेर राख्छौँ ।
आमा ः (खुसी हँुदै) ल ल । बाटन त दाम्ला ¤ तिमीहरूले बाटेको दाम्ला म पनि हेर्छु ।
(हिमाल, पहाड र मधेशले बाबियो लिएर दाम्ला बाट्न थाल्छन् । आमाले दाम्लालाई हेरिरहेको हुन्छ । रिसिया४को धुन बजिरहेको हुन्छ । प्रकाश बिस्तारै विलयन हुन्छ ।)
मोङ ः ईश्वर, देवता, भगवान्, पुर्खा ।
दोवाथोम्मा ः धामी बसेर उपकार गर्न मिल्दैन ।
मुन्दुम ः धर्मग्रन्थ
रिसिया ः मुन्दुमभित्रको एउटा शाखा ।